Raha mila porofo misimisy kokoa momba ny fiantraikan'ny finday amin'ny orinasa | Martech Zone
Raha mila porofo misimisy kokoa momba ny fiantraikan'ny finday amin'ny orinasa ianao
Nandalo dingana iray tamin'ny haitao izahay izay nanjary tranokala ho vavahady lehibe eo amin'ny mpanjifa sy ny orinasa. Ny forum ho an'ny mpampiasa, ny FAQ, ny birao fanampiana ary ny mailaka dia nampiasaina hametrahana foibe fiantsoana lafo vidy sy ny fotoana nifaneraserany izay hamahan'izy ireo hamahana ny olan'ny mpanjifa.
Saingy ny mpanjifa sy ny orinasa dia mandà ireo orinasa tsy mandray finday fotsiny. Ary ny tranokalanay finday, ny fampiharana finday ary ny tontolon'ny telefaona finday izao dia mitaky ny hamalian'ny olona iray amin'ny faran'ny findainy hafa. Na dia tsy mifandray aminao amin'ny alàlan'ny telefaona aza ny mpanjifa sy ny mpanjifa, dia izy ireo afaka mitana andraikitra amin'ny fahatokisana ny fifandraisana - misy fiantraikany amin'ny fanapahan-kevitry ny fividianana.
IfByPhone dia namorona sary mampiseho ny anjara asan'ny smartphone amin'ny fanovana fivarotana antsinjarany. Nasongadin'izy ireo ny statistika telo izay manan-danja ho an'ny mpivarotra rehetra - tsy ireo manana tombony amin'ny fivarotana ihany - no hodinihinao rehefa mieritreritra momba ny marketing amin'ny finday ianao.
30 lavitrisa antso varotra miditra dia vita tamin'ny fikarohana finday tany Etazonia tamin'ny 2013 ary 73 miliara no andrasana amin'ny taona 2018.
70% amin'ireo mpikaroka finday no manana tsindrio ny bokotra Call amin'ny valin'ny fikarohana araka ny Google.
61% ny mpanjifa mino fa zava-dehibe ny hanomezan'ny telefaonina nomeraon-telefaona hiantsoana azy ireo ary 33% no nilaza fa tsy dia hampiasa loatra intsony izy ireo ary hanondro marika tsy.
IfByPhone manome rafitra marketing ho an'ny varotra mifototra amin'ny feo mamela ny orinasa hifandray, handrefy ary hanatsara ny varotra sy ny serivisy serivisy.
Tags: ifbyphonefifanakalozana findayfikarohana eo an-toerana findayfanatsarana findayfividianana findayfivarotana antsinjaranykaroka findaylevitra fanapahan-kevitra